a. engine type: 1E34F/TU-26/1E36F/1E40F-5/139F/GX35 for choice b. type: side attached/backpack for choice c. shaft length: 1.65m/1.53m/1.25m for choice d. shaft material: stainless steel/ aluminum for choice e. blade type: nylon type/ straight/3T/4T/8T/30T for choice f. connector angle:135°/90° for choice More Information of Brush Cutter Trade Term: FOB / CFR / CIF Port: Qingdao Port/Shanghai Port Certificates: CE GS Package: Brown box, color box, also accept OEM package design Shipping : By DHL, UPS, FEDEX, large quantity by Air or Sea for you to
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ… လူကြီးမင်းတို့ကို VIDA တံဆိပ် Gasoline Engine နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ အင်ဂျင်ကို ဘက်စုံပစ္စည်းဖြင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော စက်အင်ဂျင် တစ်လုံးဖြစ်ပါသည်။ VIDA စက်အင်ဂျင်က နိုးရလွယ်ကူတယ်၊ ဆီစားလည်းသက်သာပြီး အင်ဂျင်အပူခံနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ VIDA တံဆိပ် Gasoline Engine ကို ဝယ်ယူလိုသော customer များ Group Of KZY Co.,Ltd တွင် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မှာယူရရှိနိုင်ပါသည်။
Be the first to review, share experiences, your comments on the product: KCT pesticide sprayers SL27 SYM motor 1 review Only you will have the opportunity to donate gifts to ₫ 5,000 in assets the main clause.
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ… တောင်သူဦးကြီးများအတွက် အချိန်၊ငွေ၊ လူပင်ပန်းတာ သက်သာစေသော VIDA ဘေးလွယ်မြတ်ရိတ်စက်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ တောင်သူဦးကြီးများ၏ ဥယျာဉ်၊ ခြံ၊ မြေ များတွင် လွယ်ကူစွာ မြက်ရိတ်နိုင်ခြင်း၊ နှမ်းရိတ်သိမ်းနိုင်ခြင်း၊ ကောက်ရိတ်သိမ်းနိုင်ခြင်း စသည်တို့ကို လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော STANDARD OF KOREA, VIDA အမှတ်တံဆိပ်စက်ပစ္စည်းများအား Group Of KZY Co.,Ltd တွင် လက်လီ၊လက်ကား ဖြန့်ချိရောင်းချပေးနေပါသည်။
JY-120 Reaper သည်သီးနှံများကိုရိတ်သိန်းရာတွင် လွယ်ကူစွာနှင့် ကာလကြာမြင့် စွာကြီးမားသော ဧရိယာပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့အတွက်လွယ်ကူရိုးရှင်းစွာနှင့် အဆင်ပြေပြေ လုပ်ဆောင်နိုင်သောစက်ယန္တရားဖြစ်ပါသည်။
9000 ~ 9000 $
လူကြီးမင်းတို့မြေကြီးတူးစက် second သုံးချင်သူများအတွက် excavator 3Ton Yanmar မြေကြီးတူးစက်ကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်။
12500 ~ 12500 $
လူကြီးမင်းတို့မြေကြီးတူးစက် second သုံးချင်သူများအတွက် excavator 4Ton IHI မြေကြီးတူးစက်ကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်။
Power Tiller တောင်ပေါ်ကျွဲ ထွန်ကိုင်း
Dongfeng အမှတ်တံဆိတ်ခြွေလှေ့ နှစ်ဘီးထွန်စက်ဖြစ်သောကြောင့်စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းမွန်သော Dual Function အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ဒါဟာ သူ့ရဲ့ရိုးရှင်းပြီး ကျစ် လစ်သိပ်သည်းဖွဲ့စည်းပုံမှာ ကောင်းမွန်သောယုံကြည်စိတ်ချရမှု လွယ်ကူသောထုတ်လုပ်မှု အလင်းအလေးချိန်နှင့်ကောင်းမွန်သော Crooss တိုင်းပြည်စွမ်းရည်အားဖြင့် Featured ဖြစ်ပါတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဥယျာဉ်နှင့် အနည်းငယ် ရိတ်သိမ်းခြင်းတို့အတွက်အလွန်သင့်တော်ပါသည်။
စပါးအခြောက်ခံစက်အကြောင်း တစေ့တစောင်း လေပူအားကိုအသုံးပြုကာ စပါးထုအတွင်းသို့ မှုတ်သွင်းခြင်းအားဖြင့် စပါးထဲမှ အစိုဓာတ်ကို ထုတ်လုပ်ပေးသည့် စက်ကိရိယာဖြစ်သည်။ ယခုဖော်ပြပါ စပါးအခြောက်ခံစက်သည် စပါးများကို ကန်အတွင်းတွင် အခြောက်ခံခြင်းကိစ္စပြီးစီးသည်အထိ ပမာဏအားဖြင့် တပြေးညီတည်းကို တည်ငြိမ်စွာထားပြီး အခြောက်ခံသည့်စနစ်ဖြစ်ပါသည်။ စပါး၊ ပြောင်းနှင့် ပဲအမျိုးမျိုးတို့ အတွက်လဲ အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဂရုပြုစရာ နည်းပညာ •	မျိုးစပါးများအတွက် လေ၏အပူချိန်မှာ ၄၃ံစင်တီဂရိတ်ထက် မများရပါ။ •	အပူချိန် မြင့်မားပါက အခြောက်ခံခြင်းကို မြန်ဆန်စေသော်လည်း အစိုဓာတ်ကွာဟမှုကို မြင့်မားစေသည်။ •	လေအားကို ပိုစေပါက အခြောက်ခံခြင်းကို မြန်စေသော်လည်း စွမ်းအင်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်မှာ ပိုလာမည်ဖြစ်သည်။ •	ရောနှောပေးခြင်း၊ မွှေပေးခြင်းကို အခြောက်ခံနေစဉ်တွင်း ပြုလုပ်ပေးပါက အစိုဓာတ်ကွာဟမှုကိုကို လျော့ပါးစေသည်။ အသုံးပြုခြင်းအတွက် အားသာချက်များ •	အသုံးပြုရ လွယ်ကူသည်။ •	စပါး၊ ပြောင်းနှင့် ပဲအမျိုးမျိုးတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ •	နေလှန်းခြင်းထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အရည်အသွေးကိုရရှိစေသည်။ •	ပုံစံရိုးရှင်းသည့်အတွက် အလွယ်တကူပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။ •	ပုံစံမှာ ကျစ်လစ်ပြီး တနေရာမှတနေရာသို့ စက်အစိတ်အပိုင်းများကို အလွယ်တကူ သယ်ဆောင်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ •	လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမရရှိသော ဒေသများတွင်မူ ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်အင်ဂျင်များကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ လျှပ်စစ်ရပါက မော်တာကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ စပါးအခြောက်ခံစက် ဘာကြောင့်အသုံးပြုသင့်သလဲ? စက်ဖြင့်အခြောက်ခံခြင်းသည် နေပူလှန်းပြီးအခြောက်ခံခြင်းထက် အရည်အသွေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်သောစပါးကို ရရှိစေပါသည်။ အထူးသဖြင့် ရာသီဥတုဆိုးရွားသော ဖောက်ပြန်သော ရာသီနှင့် မိုးတွင်း၊ အခါများတွင်စပါး လေလွင့်ဆုံးရှုံးမှုများကို ကာကွယ်ပေးသည်။ အခြားသော ခေတ်မီစပါးအခြောက်ခံစက်ကြီးများ ထက်စာလျှင် ပုံစံရိုးရှင်းသည့်အပြင် တန်ဖိုးမှာလွန်စွာနည်းသော်လည်း ယင်း၏အခြောက်ခံနိုင်မှုပမာဏမှာမူ ယင်းစက်ကြီးများနှင့် နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါသည်။ စပါးအခြောက်ခံစက်၏ ပုံစံနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံ တကြိမ် အခြောက်ခံလျှင် ကြာမည့်အချိန်မှာ ထည့်လိုက်သော စပါး၏အစိုဓာတ် (Initial MC %) အပေါ်မူတည်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် အစိုဓာတ် ၂၀%ရှိသောစပါးကို အခြောက်ခံမည်ဆိုပါက ယင်းစပါးနောက်ဆုံးရှိရမည့် အစိုဓာတ်ကိုလည်း သိထားရန်လိုပါသည်။ နောက်ဆုံး အစိုဓာတ်မှာ ၁၄%ဖြစ်သည်။ ယင်းနှစ်ခုခြားနားပါက ၆%ဖြစ်သည်။ ရှေ့တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း တနေရီလျှင် အစိုဓာတ် ၁.၅ မှ ၂% ချသည့်အတွက် ကြာမြင့်မည့်အချိန်မှာ ၃-၄ နာရီခန့် ကြာပါမည်။ ဘယ်လိုမောင်းနှင်အသုံးပြုမှာလဲ?? •	မောင်းနှင်မည့် အင်ဂျင်တွင် ချောဆီ၊ မောင်းဆီများကို ဖြည့်ပါ။ •	ပန်ကာပူလီကြိုး တင်းမတင်းစစ်ပါ။ မတင်းပါက စနစ်တကျချိန်ညှိပေးပါ။ စက်၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလက်စွဲကို သေချာစွာဖတ်ရှုထားပါ။ •	စပါးထည့်ကန်တွင်းသို့ စပါးများကို ထုညီညာစွာထည့်ပါ။ အကယ်၍ စပါး၏အစိုဓာတ်များ မညီညာပါက အခြောက်ခံခြင်းကို မပြုလုပ်မီ သေချာစွာရောနှောပေးရန် လိုပါသည်။ •	အခြောက်ခံခြင်းစတင်သည့်အခါ ပထမဦးစွာစိုနေသော စပါးထုတွင်းသို့ နာရီဝက်မှ တနေရီခန့် ထိ လေအေးကို မှုတ်ပေးခြင်းဖြင့် အရည်အသွေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။ •	ယင်းနောက် မီးဖိုတွင်စပါးခွံကို မီးရှိူ့ပေးခြင်းဖြင့် လေပူဖြင့်ဆက်လက် အခြောက်ခံရပါမည်။ •	လေ၏အပူချိန်နှင့်အစိုဓာတ်ကို တနေရီတစ်ခါတိုင်းတာရန် လိုအပ်ပါသည်။ •	စပါးထု၏အလယ်ပိုင်းရှိအစိုဓာတ်မှာ ၁၄%ခန့် ရောက်ရှိလာသောအခါလေအေးကို မိနစ်၂၀ မှ နာရီဝက်ခန့် ဆက်ဆက်ပေးပြီး အခြောက်ခံခြင်းကို ရပ်တန့် ရပါမည်။
စွမ်းဆောင်ရည်များ •	ဤလက်တွန်းမျိုးစေ့ချကိရိယာသည် အရည်အသွေးကောင်းမွန်၍ အလေးချိန် ၁၂ ကီလိုဂရမ်ခန့်သာရှိသောကြောင့် ပေ့ါပါးပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူပါသည်။ အသုံးပြုနိုင်သော ပမာဏမှာ တစ်နေ့ လျှင် ၂ဧကမှ ၃.၃ ဧကအထိ မျိုးစေ့ချနိုင်ပါသည်။ •	မြေပြန့် ၊တောင်ပေါ်၊ ကုန်းမြင့် ဒေသမရွေး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဤမျိုးစေ့ချကိရိယာတွင် မျိုးချပေါက် ခုနှစ်ပေါက်ပါဝင်ပြီး ပြောင်း၊ ပဲပုပ်၊ မြေပဲ၊ ဝါ အစရှိသည့်အတွက် အထူးသင့်လျော်သည်။ စိုက်ကျင်းတစ်ကျင်းလျှင် တစ်စေ့မှ နှစ်စေ့သာ အစေ့ချရန် တိကျစွာ ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် မျိုးစေ့ချွေတာပြီး လေလွင့်ဆုံးရှုံးမှု နည်းပါးစေပါသည်။ •	အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောဂီယာကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် အသုံးပြုရာတွင် ဘီးလည်ပတ်မှုပေါ့ပါးချောမွေ့ ပြီး တာရှည်အသုံးခံပါသည်။ •	စက်၏ကိုယ်ထည်မှာ ထွင်းဖောက်မြင်နိုင်သော ကိုယ်ထည်ကိုအသုံးပြုထားသောကြောင့် အသုံးပြုသူအနေဖြင့် အစေ့ချရာတွင် တိကျမှုရှိခြင်းကိုသိရှိနိုင်ပြီး ကျန်ရှိသော အစေ့ပမာဏနှင့် မြေသြဇာအခြေအနေတို့ ကို လွယ်ကူစွာသိရှိနိုင်သည်။ •	အသုံးပြုသူအနေဖြင့် မိမိချလိုသော မျိုးစေ့အရေအတွက် တန်းခြား၊ စိုက်ကျင်းအနက်တို့ ကို အလိုရှိသလို ချိန်ညှိနိုင်ပါသည်။ •	လက်ကိုင်တန်းကို မိမိလိုချင်သည့် အမြင့်ပမာဏအတိုင်း သီးသန့် ချိ်န်ညှိသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ •	လက်ကိုင်ခုံ၊ တွန်းခုံ၊ ကိုယ်ထည်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို အညွှန်းအတိုင်း တပ်ဆင်ပါ။ •	မျိုးစေ့ နှင့် အသုံးပြုမည့်မြေသြဇာကို ပုံးအတွင်းသို့ ထည့်သွင်းပါ။ •	မျိုးစေ့ချကိရိယာအား စိုက်တန်းအတိုင်းထား၍ အစေ့ချခွက်အား မြေပြင်နှင့် ထောင့်မှန်အနေအထားထားပါ။ •	လက်တန်းအားကိုင်ပြီး အရှေ့သို့ ခပ်မှန်မှန်တွန်းသွားပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် ဖြေးဖြေးမှန်မှန်တွန်းပေးပါ။ မြန်မြန်တွန်းခြင်း၊ နောက်ပြန်ပြန်ဆွဲခြင်းများ မပြုလုပ်ရ။ ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်။ •	ကိရိယာအားမတပ်ဆင်ခင် အညွှန်းအား သေချာဖတ်၍ ပုံတွင်ပြထားသော အညွှန်းအတိုင်းတပ်ဆင်ပါ။ ပုံတွင် ပြထားသော အညွှန်းအတိုင်းတပ်ဆင်ပါ။ •	စိုက်သွားအား မိမိစိုက်ပျိုးလိုသော သီးနှံအရွယ်အစားနှင့် ကိုက်ညီအောင် ချိန်ညှိပါ။ •	မျိုးစေ့အားမထည့်သွင်းမီ ခြောက်သွေ့အောင်ပြုလုပ်ပါ။ မျိုးစေ့များကို စိုစွတ်နေပါက အစေ့ချရာတွင် လွယ်ကူစွာမကျဆင်းနိုင်ပါ။ •	မစိုက်ပျိုးမီ မိမိလိုချင်သော ပုံစံ၊ စိုက်တန်းနှင့် ထည့်သွင်းလိုသော မြေသြဇာပမာဏကို ချိန်ညှိနိုင်ရန် ကနဦးစမ်းသပ်ခြင်းက ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။ •	ကိရိယာအစိတ်အပိုင်းများကို ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်း၊ အသုံးပြုပြီးပါက ပုံမှန်သန့် ရှင်းရေုးပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ မြေသြဇာထည့်သောပုံးကို သေသေချာချာသန့် ရှင်းပေးခြင်း အစရှိသော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကို ပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးပါ။ အသုံးမပြုပါက ခြောက်သွေ့သောနေရာတွင် သိမ်းဆည်းထားပါ။
ပန်းပင် ချစ်သူများအတွက် အပင် ပျိုးထောင်ရတာ လွယ်ကူစေမယ့် အပင်စိုက် လက်အိတ် ကို Rocket တွင် မှာယူလိုက်ပါ။ ညာလက်အိတ်နဲ. မြေများကို တူးဆွနိုင်ခြင်း၊ နှင်းဆီပန်းများရဲ. အဆူးများရန်မှ ကာကွယ်ပေးခြင်း၊ လက်ပေခြင်းမှ ကာကွယ်ခြင်း၊ အလွယ်တကူ သန်.ရှင်းနိုင်ခြင်းဖြင့် လွယ်ကူစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆင်မပြေ ဖြစ်နေတဲ့ အပင်စိုက်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ပျော်ရွှင်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ https://www.goamiroo.com/products/garden-genie… ဈေးနှုန်း - 15000 kyats Delivery free in Yangon ရန်ကုန်မြို.ပြင် = ၂ထောင်ကျပ် နေ.ချင်းအမြန် = ၂ထောင်ကျပ် မြန်မာနိုင်ငံမြို.ကြီးအားလုံး အိမ်အရောက် ၃ထောင်ကျပ် တခြား မြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Male) 09768484878 (Female) also viber ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
ဗီယက်နမ် စပါးမျိုးစေ့ချကိရိယာသည် လူ့ဖြင့်ဆွဲ၍ မျိုးစေ့များကို အတန်းလိုက်ချပေးသော ကိရိယာဖြစ်သည်။ ထင်းတွင်းမျိုးစေ့ချဘူး ၆ဘူး ပါဝင်သည်။ ယင်းဘူး၏အလျားမှာ ၁၀လက်မ (၂၅၀ မမ) နှင့် အချင်းမှာ ၇လက်မ (၁၀၀ မမ) ခန့် ရှိပါသည်။ ရွှံ့ထဲတွင် လှိမ့်သွားနိုင်မည့် ပလပ်စတစ်ဘီး ၂ ခုမှာ တဖက်စီတွင်ရှိပြီး ယင်းဘီးများ၏ အချင်းမှာ ၂၂လက်မခွဲ (၅၇၅ မမ)ခန့် ရှိပြီး ပေါ်လီအီသိုင်းလင်း ပလပ်စတစ်အမျိုးအစားဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါသည်။ ယင်းဘီးများမှာ မျိုးစေ့ချကိရိယာ၏ တဖက်တချက်တွင် တပ်ဆင်ထားသဖြင့် လည်ပတ်သည့်အခါ မျိုးစေ့ထည့်ဘူးများအတွင်းမှ မျိုးစေ့များ ရွှံ့မြေပေါ်တွင် ထွက်ကျလာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထူးခြားချက်များ၊ အားသာချက်များ •	မျိုးစပါး သုံးစွဲရမှုကို ၅၀-၈၀% အထိချွေတာနိုင်သည်။ •	အလွယ်တကူ သယ်ယူသုံးစွဲနိုင်သည်။ ခိုင်ခန့် သည်။ ပေါ့ပါးသည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် လွယ်သည်။ •	မျိုးစေ့များကို အတန်းလိုက် ညီညာစွာချသွားသဖြင့် နောက်ပိုင်းပေါင်းရှင်းသည့်ကိစ္စများ လွယ်ကူစေသည်။ ကြားပေါင်းလိုက်ကိရိယာဖြင့် အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည်။ •	မျိုးစေ့နှုန်းထားကို လိုသလိုထိန်းညှိနိုင်သည်။ ကုန်ကျမှု (၈) ပြည်မှသည် တစ်တင်းထိ ချိန်ဆပြီး ချနိုင်သည်။ •	ယင်းကိရိယာအားဖြင့် သုံးစွဲရာတွင် လူတစ်ယောက်သာလျှင် လိုအပ်သည်။ လုပ်အားလိုအပ်ချက်မှာ ကောက်စိုက်သည့်အခါ လူလိုအပ်သည်ထက်များစွာ နည်းသည်။ ဗီယက်နမ်မျိုးစေ့ချ ကိရိယာအသုံးပြုပြီး မျိုးစေ့ချခြင်း ၁) လယ်ကသမန်းကို ကောင်းစွာညက်စေပြီးညီညာအောင် ညှိပေးထားပါ။ ၂) လယ်ကွင်းတွင်းမှ ရေကို မျိုးစေ့မချမီ ထုတ်ပစ်ရပါမည်။ သို့သော် သမန်းပြင်ခြောက်ပြီး မာနေအောင်တော့ မဟုတ်ပါ။ ၃) စာပါးစပ်ပြရုံ (သို့ မဟုတ်) အမြစ်မွှေးလေးထွက်စအဆင့်ဖြစ်အောင် စပါးအညှောင့်ဖောက်ပါ။ ရေစိမ်ပြီး တစ်ရက်အကြာဆိုလျှင် တော်ပါပြီ။ အမြစ်များ အလွန်ရှည်သည်အထိ မထားရပါ။ ရှည်ပါက မျိုးစေ့ချရာတွင် အခက်အခဲရှိနိုင်ပါသည်။ ၄) ချတော့မည် မျိုးစေ့များကို ၁၀မိနစ်၊ ၁၅မိနစ်မျှ လေသလပ်ထားပေးခြင်းဖြင့် အနည်းငယ်ခြောက်သွေ့သောမျိုးစေ့များမှာ ချသည့်အခါတွင် အကျကောင်းပြီး အလုပ်တွင်ကျယ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ၅) မျိုးစေ့ချခြင်း 	မျိုးစေ့ဘူးအတွင်းသို့၃ပုံ ၂ပုံမျှသာ ထည့်ပါ။ သို့ မှသာ လွတ်လပ်စွာကျမည်ဖြစ်သည်။ 	ပုံမှန်နှုန်းဖြင့် တလှမ်းချင်းဆွဲသွားပါ။ ၆) မျိုးစေ့ချပြီးပါက ၂ရက် ၃ရက် ခန့် ရေမသွင်းပဲထားပါ။ အမြစ်များ ကောင်းမွန်စွာစွဲမြဲသွားစေရန် ဖြစ်ပါသည်။ ၇) မျိုးစေ့များမှ အမြစ်များကောင်းစွာစွဲသွားပါက ရေကို အနည်းငယ်သွင်းပေးပါ။ သို့ သောအပင်များ လုံးဝမြုပ်သွားသည်အထိ မသွင်းရပါ။ မိုးရာသီအချိန်များမှာ ချခါစ စပါးမျိုးစေ့များ မိုးရေနှင့်အတူ မျောပါသွားတက်သည်ကို သတိပြုရပါမည်။ ၈) အပင်ငယ်များရှင်သန်လာသည်နှင့်အမျှ ရေကိုသွင်းပေးခြင်းဖြင့် ပေါင်းပင်များ ပေါက်ရောက်မှုကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Kubota Combine Harvester DC-70-စပါးရိတ်စက်
မြင်းကောင်ရေအား- ၇၀ စွမ်းအားပြည့်ထုပ်လုပ်နိုင်သော ဒီဇယ်ဘိုတာမော်တာတာဘိုချာ့စနစ်ဖြင့် အပြည့်အဝ ခြောက်သွေ့စေသောအမျိုးအစားဖြစ်သည်။မြင့်မားသောလိမ်အားစနစ်ဖြင့် ရွေ့ရှားစေပြီး အင်ဂျင်ခံနိုင်ရည်ရရှိစေပါသည်။ပျှမ်းမျှ တစ်ဧကလျှင် ဒီဇယ်ဆီ ၇.၅ လီတာ မှ ၁၀ လီတာသာကုန်ကျပါသည်။